Spin A Higaada – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
💫 Spin A Higaada – Hel Lacagaha Sixirka💫
Ku soo celi Gurigaaga Magic-ka ah ee Dunida Midabka leh ee Spin A Spell!
Ku raaxayso sifooyinkan:
– Higaad ku garaacida oo wax ka xaddo asxaabta
– Dooro xayawaankaaga oo isticmaal xirfadahooda ugu dambeeya ee xayawaanka
– Hel qadaadiic si aad u qurxiso Guriga Magic-ka
– Nakhshad Jardiinooyin gaar ah oo adiga kuu gaar ah
– La ciyaar asxaabta to compete in the Magic Tournament!
Selina si lama filaan ah ayaa telefishan loogu diray si loo soo celiyo Guriga Magic-ka. Tacaburkeeda cusub waxa ka buuxa khataro, siraha iyo saaxiriinta quruxda badan. Iyadoo wehelkeeda xayawaanka lagu kalsoon yahay ee Fluffy si uu u hago, Selina ma noqon kartaa Master of the Great Magic Tournament?
Isticmaal Higaada Saaxiibada Saaxiriinta!
🔮 Baro inaad tuurto higaada cusub si aad u soo celiso jardiinooyinka oo aad daaha uga qaaddo siraha ku qarsoon. Ku naqshadee gurigaaga Magic-ka leh ee ushaada. Jardiinooyin badan oo aad sahaminayso sixir badan oo aad baran karto si aad ugu dagaallanto Tartanka Sixirka Weyn!
Weerar iyo xado saaxiibada!
⚡ Isticmaal sixiro gaar ah si aad u weerarto saaxiriintaada! U beddelo rah ama hooyooyin, ama si fudud u weerar oo wax u xadaan si ay u ururiyaan lacagtooda. Laakin ka digtoonow weerarrada soo socda, u rog si aad u kasbato gaashaanka oo aad u ilaaliso lacagtaada.
Kobcinta Xirfadaha Xayawaanka!
🐾 Baadh Guriga Magic-ka oo soo ururi xayawaanka aad jeceshahay. Xayawaan kasta oo cusub wuxuu leeyahay xirfad gaar ah oo leh wareegyo bilaash ah si uu u kasbado Super Bonus. Isticmaal cuntada xayawaanka si aad kor ugu qaaddo oo aad kor ugu qaaddo xayawaankaaga rabaayada ah si aad u kordhiso abaalmarinta gunnada.
Ururi dhammaan Kaararka!
🎁 Spin si aad u guulaysato khasnado qadaadiic ah, iyo kaararka sixirka. Ururi dhammaan kaadhadhka shaxda si aad ugu guulaysato abaal-marinno xooggan. Beer kasta oo cusub waxaad ku qurxinaysaa, Abaalmarinta kaadhkaaga ayaa aad uga sii badnaan doona.
La ciyaar asxaabta!
Ku biir bulsho cusub oo saaxiibo ah oo madadaalo leh 2021.
Raac Spin A Spell si aad u hesho dalabyo iyo gunooyin gaar ah!
Kooxda Facebook: https://www.facebook.com/groups/181966850259127
Ku Soo Biir Bulshada, Aan Wada Ciyaarno!
Dhibaato ma ku haysataa?
Fadlan nala soo xiriir adigoo fariin toos ah ugu soo diraya boggayaga Taageerada Facebook ee kore, ama noogu soo dir emailka selina@aladinfun.com
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Spell, Spin
← 456 Ciyaarta Badbaadinta Imposter – Khiyaamo&Hack Dabo Qurux Badan: Ciyaarta Otome – Khiyaamo&Hack →